Boky tsy manam-paharoa
Fakafaka bokyPosté par Berïnson 2014-06-01 09:55
Ny Baiboly. Ahitana endrika literatiora koa ao anatiny: manomboka amin’ny tononkalom-pitiavana, tantaram-piainana, taratasy nosoratana ho an’olona na vondron’olona manokana, faminaniana, lalàna sns. Tsy misy afaka misingana anefa ireo fa ny fitambaran’izy rehetra no mahafeno ny Baiboly. Amin’ny ankapobeny dia azo sokajiana 7 ireo karazan-tsoratra hita ao aminy: ireo bokin’i Mosesy, ireo tantaran’ireo fanjakana fahiny nifanesy, ireo soratra poetika, ireo tenim-pahendrena, ireo faminaniana, ireo evanjely ary ireo epistily.
Satria ny kanto no tiana asongadina dia andeha ireo soratra poetika ao amin’ny Baiboly no hovoaboasantsika eto: ny Salamo, ny Tononkiran’i Solomona ary ny Fitomaniana. Ireo boky telo izay samy poetika ireo dia samy miendrika amboaran-tononkalo avokoa.
Misy salamo ampiasaina rehefa hanao sorona fangatahana na fisaorana ao amin’ny Tempoly. Ao ny salamo fangataham-pamonjena noho ny aretina, ny fiampangana diso na ny tsy rariny. Ao ny voady. Ao ny salamo fiderana noho ny vonjy na fanafahana azo avy amin’Andriamanitra.
”Misafoaka manenjika mandrakariva ny mpampahory ahy; maro tokoa ny mirehareha miady amiko. Amin’ny andro atahorako no itokiako Anao.” Salamo 56: 2.
Ny Tononkiran’i Solomona dia mirakitra ireo tononkalo momba ny tena fitiavana. Kisendrasendra nandritra ny fitsangatsanganany an-kalesy no nahitan’i Solomona Mpanjaka ilay tovovavy tantsaha izay nanintona azy mafy. Nanana vady maro i Solomona saingy niavaka indrindra ny fitiavany ity tovovavy ity ka nahaloa-bolana azy hoe:
”Mampianiana anareo amin’ny gazela na amin’ny dieravavy any an-tsaha aho, ry zanakavavin’i Jerosalema: Aza manaitra na mamoha ny fitiavana raha tsy efa sitrapony.” Tononkiran’i Solomona 2: 7.
Mifanohitra amin’ireo boky roa tononina etsy ambony fa ny Fitomaniana dia mirakitra alahelo mafy. I Jeremia mpaminany no nanoratra azy taorian’ny naharavan’ny mandan’i Jerosalema. Noho izany, ireo tononkalo ao dia mitantara ny fisaonan’ny Jiosy ny faharavan’i Jerosalema sy ny nirodanan’ny tempoly. Nadikan’ireo vahoaka ireo ho fandaozan’Andriamanitra azy ny fahareseny ka nokaikerin’ny nenina izy ireo.
”Indrisy, mitoetra manirery izao ilay tanàna feno olona! Efa tonga toy ny mpitondratena izy! Ilay nalaza tamin’ny firenena sy andriambavy tamin’ny tany samy hafa dia efa miankin-doha kosa izao!” Fitomaniana 1:1.
Kanto dia kanto tokoa ny nanoratana ny Baiboly, Tenin'Andriamanitra. Ny hafatra raketiny sy ampitainy ho an'ny zanak'olombelona anefa no zava-dehibe indrindra.
01 mey 2014
Mihevitra toy ny mpampianatra
Raha fantatrao ry neny, an'i DadaRabe
2013: taona sampona?
Voa mahareta, an'i Abéline Eléonore
Kajinao, an'i Thina Andriafaly
Nofiko, hono, Madagasikara...